Kubonakala sengathi kungase kube lula kuka iresiphi pancake! Noma yimuphi wekhaya abanolwazi nakalula pancake okumnandi futhi kamnandi, usebenzisa okwenzeka kuye uqobo. Eqinisweni, indlela yokuthola lokhu dish ezihlukahlukene ezinhle! Futhi ngamunye wabo e yokuqala yabo futhi emuhle. Ngakho, ukulungiselela pancake!
Recipe ukupheka pancake banana
Ezimbili ezinkulu kanye sesivuthiwe kakhulu banana (ikhasi kufanele kube sinombala) Mash ngemfoloko ukuthi bahlanganise. Engeza nezinkezo ezimbili ezincane ushukela, usawoti kancane, amaqanda amane futhi abashaya nge mixer noma blender kuze bushelelezi. Qhubeka eshaya, kancane kancane ngokungeza ingilazi ufulawa. Khona-ke zonke uthele 300 ml ubisi bese efakwa imbala emaminithi la-20.
Ngemva zokwazi, engeza ambalwa spoonfuls enkulu emafutheni zemifino kanye ukuxuba. Inhlama usulungile, singaqala Fry pancake on epanini esishisayo.
Step by step recipe for pancake amazambane ezazigxishwe inyama
1. Grate 4 - 5 amazambane.
2. Hlukanisa amazambane amaqanda amabili uhlanganise.
3. Engeza inhlama emhlabeni izinkomishi kafulawa. Uma ekugcineni uthole zamanzi, ungakwazi ukwengeza ngaphezulu.
4. Beka izinongo, kahle kule ikhumini iresiphi.
5. Shisisa epanini ukuthosa Fry pancake. ukuhlolwa Vykladyvanii level ke ngesipuni.
6. Ulungiselela ukugcwaliswa: epanini ufake 200 amagremu oqoshiwe inyama abilisiwe (ikhona), ukubeka naso anyanisi oqotshiwe nokukodwa pepper oqoshiwe. Ibila kuze ithenda.
7. Beka ukugxusha okuphekwe on amazambane pancake futhi twist.
pancake Buckwheat nemvubelo
Okokuqala kudingeka silungiselele ekhofini. Kuze kube yimanje, ezintathu izinkomishi ufulawa nokunye okufana nokolweni uthele 0.6 amalitha ubisi olufudumele abilisiwe futhi uthele iphakethe imvubelo ezomile. Ngemva kokuba elinye ihora Inhlama kufanele avuswe.
Grind ezinhlanu amaqanda izikhupha amagremu 100 ibhotela sashintsha futhi, uthele 200 amagremu ukhilimu omuncu. Govuza, uthele isisindo kunikezwa ezimbili izinkomishi ufulawa bese uthele ingilazi yobisi abilisiwe. Xhuma phisa ne inhlama uhlanganise kahle kakhulu. Beka ukufinyelela inhlama kuze kuphele amahora amabili.
Beat amaprotheni ezisele futhi 300 ml ukhilimu awathulule ku inhlama, uhlanganise futhi ake ume imizuzu 15. Khona ungaqala ukubhaka pancake.
Indlela Yokuthola pancake, imiqulu
Okokuqala, ukulungiselela inhlama. Beat amaqanda amane futhi uthele ilitha ubisi. Engeza ambalwa wezipuni amafutha yemifino, usawoti, futhi cishe ezimbili izinkomishi kafulawa. Kusukela kwaphumela inhlama gazinga pancake.
Futhi manje sekuyisikhathi uqala ukugcwalisa. amaphakethe amabili 250 amagremu curd mass ayifake blender, ugcwalise-10 amagremu gelatin uhlanganise. Endaweni ehlukile, sibe yimichilo, ubhanana ezimbili, amagonandoda zimbili ikiwi (izithelo kungasetshenziswa ikhona). Ngamunye Pancake lokuqala smear curd mass, bese, uma silungiselela imiqulu, wagqoka onqenqemeni strip Pancake nezithelo Pancake zihambisana.
Susa pancake for isigamu sehora in the esiqandisini, uthole bese uthathe tincetu ke.
Indlela Yokuthola pancake kusukela omuncu ubisi ukugcwaliswa
Beat amaqanda amabili, enezele futhi kancane kwengxenye eyodwa lemon acid soda. Ushukela nosawoti ukubeka uwedwa.
Thela inhalanganiselo ingilazi amasi. Whisking, kancane uthele 300 amagremu kafulawa. Govuza kuze zonke izigaxa zinyamalale. Ngemva kwalokho, uthele omunye ingilazi amasi.
Kusukela inhlama okuholela ukupheka pancake.
Ukuze ngokugcwalisa ahlanzekile 250 amagremu apula, cored futhi uthathe ezincane. Beka i-pan phezu komlilo, uthele endaweni eyodwa ingilazi yamanzi ethafeni wafaka nezinkezo ezimbili ezinkulu ushukela. Uma ketshezi uqala ukubilisa, wafaka apula pan. Fry kubo kuze kube yilesi sikhathi, kuze kube yilapho yonke amanzi uye ayahwamuka.
Ukulungele ukubeka apula endishini uhlanganise nabo kwengxenye isipuni isinamoni. Sabalalisa ukugxusha sasipheka pancake ubanikeze yiluphi uhlobo. Ungakwazi Roll imiqulu noma nje onxantathu.
Jabulela itiye lakho nge pancake okumnandi!
Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni Coolstream: brand, Ukucaciswa, ukubuyekezwa